ပျားပန်းခပ် ရှုပ်ထွေးသောလမ်းကို ကလေးငယ်များနှင့် ဖြတ်ကူးချိန်ဆိုလျှင် ကျွန်တော် တို့က လက်ကိုကမ်းပေးပြီး “မြဲမြဲကိုင်ထားနော်”ဟု ပြောလျှင် ကလေးများကလည်း သူတို့အားလေးနှင့် တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို စိတ်ချထား၍မရပါ။ ၎င်းတို့၏ လက်ကို ပြန်လည်ကိုင်ထားမှ ၎င်းတို့အန္တရာယ်မဖြစ် အောင် စောင့်ရှောက်နိုင်မည်။ သို့ဖြစ်၍ ရှင်ပေါလုက “ခရစ်တော်သည် ငါ့ကို ကိုင်ဖမ်းတော်မူ၏”ဟု ဆိုခဲ့သည် (ဖိ ၃း၁၂)။ တိတိကျကျ ဆိုရလျှင် “ခရစ်တော် ကျွန်ုပ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထား၏။”
သေချာသည်က ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ၊ သခင်ယေရှု၏တန်ခိုးနှင့်ပြည့်သော ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကြောင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့ ဘေးကင်းလုံခြုံ ရသည်။ ကိုယ်တော်၏ဆုပ်ကိုင်ထားသောလက်တော်မှ မည်သူကမှ ဆွဲထုတ်မသွား နိုင်ပါ။ မကောင်းဆိုးဝါးများလည်း မထုတ်နိုင်၊ မိမိကိုယ်ကိုလည်း မဆွဲထုတ်နိုင်ပါ။ ကိုယ်တော်၏လက်ထဲ ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ကြိမ်ရောက်ရှိသွားပါက သူလက်မလွတ်တော့ပါ။
“ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့လက်မှ မနုတ်မယူရာ။ ထိုသိုးတို့ကို ငါ၌အပ်ပေးတော်မူသော ခမည်းတော်သည် ခပ်သိမ်းသောသူတို့ထက် ကြီးမြတ်တော်မူ သည်ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့ခမည်းတော်၏လက်မှ မနုတ်ယူရာ” (ယော ၁၀း၂၈-၂၉)ဟူသော ကတိတော်ကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ချစရာဖြစ်သည်။
နှစ်ထပ်ကွမ်းလုံခြုံမှုရှိသည်။ ခမည်းတော်ဘုရားက တစ်ဖက်၊ ကယ်တင်ရှင် သခင်က တစ်ဖက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို မြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားပါသည်။ ဤလက်များသည် တောင် များနှင့် သမုဒ္ဒရာများကို ပုံသွင်းခဲ့ပြီး ကြယ်များကိုလည်း အာကာသထဲသို့ ပစ်လွှတ်လိုက် သော လက်များဖြစ်ပါသည်။ ယခုဘဝ၊ နောက်ဘဝရှိ မည်သည့်အရာကမှ “ငါတို့သခင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ခံရသောဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့် မကွာစေနိုင်ပါ” (ရော ၈း၃၉)။ — David Roper
မေတ္တာတော်နှင့် ကမ်းလက်ပြုလျက် ကျွန်ုပ်လက်ကိုဆွဲကိုင်မူ၍ ကျေးဇူးတင်လှပါ၏။ ဘဝတစ်လျှောက် လက်ျာလက်တော်ဖြင့် လမ်းပြပို့ဆောင်ခဲ့ပါ၏။
သက်ဆုံးတိုင် ကျွန်ုပ်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး လုံခြုံစေမည်ဟု ကိုယ်တော့်ကို ယုံကြည်ပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်သူဖြစ်၏။
December 31, 2013 — by David H. Roper
Doubly safe: Our Father on one side and our Lord and Savior on the other, clasping us inaviselike grip. These are the hands that shaped the mountains and oceans and flung the stars into space. Nothing in this life or the next “shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord” (Rom. 8:39).